Industry - AGG Power Technology (UK) CO., LTD.
Mila Industrial fametrahana angovo eo amin'ny fitondrana ny foto-drafitrasa sy ny dingana famokarana.
Tena ilaina indraindray ny manome indray-up famatsiana herinaratra ao amin'ny hetsika ny Grid outage mba hiarovana sasany dingana sarotra indrindra, na raha misy interruption ho tena manimba eo amin'ny toerana azo antoka na ny vidiny.
AGG Power niteraka milentika manolotra vahaolana azo antoka sy matanjaka noho ny indostrialy na fampiharana amin'ny famokarana sy ny back-ny fomba, niaraka tamin'ny iray tsy mety resy fari-fanompoana.
Tsara fantatrareo hoe ny tetikasa tsy manam-paharoa, sy ny tenany manokana faneren'ny, AGG fahefana dia manolotra anao ny injeniera fahaizana hanao ny mari ny fahefana vahaolana izay mifanaraka ny fepetra arahana.
Afaka manampy anao mihitsy aza mba hanorina ny fepetra arahana sy fahazoan-dalana ny tsara indrindra niteraka milentika izay hihaona ny zavatra ilaina.
Maherin'ny 120 mpivarotra aounrd izao tontolo izao ao amin'ny niteraka hametraka tsena ary rehefa nahavita jatony sarotra sy bespoke tetikasa, AGG Power manome anao ny fiadanana-tsaina ny azo antoka ny hery famokarana fototra, haingana fanompoana, hahazoana antoka fa ny indostria toerana dia afaka miasa reliably ary soa aman-tsara.